Voaniho (voany) - Wikipedia
Ny voaniho dia voankazo fihinana avy amin' ny zavamaniry mitovy anarana aminy, atao amin' ny anarana ara-tsiansa hoe Cocos nucifera, izay maniry any amin’ ny faritra manana toetanin-jana-pehin-tany eto amin’ izao tontolo izao.
Ny voam-boanio dia mitangorona 10 hatramin’ ny mihoatra ny 20. Mirefy 30 sm eo ho eo ny voan’ ny voaniho rehefa lehibe. Miendrika boribory lavalava izany sady misy hodiny mafy toy ny vato, voafono hodiny matevina be tsiratsiraka.
Miloko fotsy sady mitahiry menaka azo hanina na anaovana zavatra hafa (savony, labozia) ny nofom-boanio, izay poaka aty ao anatin’ izany hodiny izany. Ao anatin’ io nofony fihinana io dia misy ranony toy ny ronono sady mamimamy. Sakafo mahavelona ny nofom-boan’ ny voaniho any amin’ ireo faritra aniriany eto amin’ izao tontolo izao. Azo anamboarana doberam-boanio ny nofom-boany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Voaniho_(voany)&oldid=1043359"
Voaova farany tamin'ny 29 Janoary 2022 amin'ny 13:34 ity pejy ity.